ကလကတ် (ငှက်) - ဝီကီပီးဒီးယား
(Cotton pygmy goose)
ကရကတ်သည် ဝမ်းဘဲတစ်မျိုးဖြစ်၏။ ကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် နေထိုင်၍ ရေအိုင် ရေကန်များ တွင် ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမြဲတမ်း နေထိုင် သော ငှက်တစ်မျိုး ဖြစ်၏။
ဤငှက်သည် အလျား ၁၃ လက်မခန့်ရှိ၍ ဝမ်းဘဲမျိုးတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အမွှေးအတောင် စုံပြီး သော ငှက်ဖိုသည် ဦးခေါင်းညိုမည်း၍ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြူဖွေးနေသည်။ လည်ပင်း အောက်ပိုင်းတွင် မည်းနက်သော အရစ်ကြီးတစ်ခု ပါရှိသည်။ ကိုယ်အထက်ပိုင်းမှာ အစိမ်းနှင့် ခရမ်းရောင်နု ဖြစ်၏။ ခြေထောက်နှင့် နှုတ်သီးမှာ မည်း၍ မျက်စိမှာ နီသည်။ အဖိုနှင့် အမမှာ အနည်းငယ်သာ ကွာခြား၍ ငှက်ကလေး များမှာ ငှက်မနှင့်ပို၍ တူကြသည်။
ကရကတ်သည် မြစ်ပြင်နှင့်တကွ သစ်ပင်ချုံ့ဖုတ် ပေါများ သော အင်းအိုင်၊ ချောင်းမြောင်းများတွင် အုပ်သင်းဖွဲ့၍ နေတတ် သည်။ ရေပြင်၊ ရေအောက်ရှိ ပိုးမွှားများနှင့် ရေပေါ်ပင်များကို စားသောက်ကြသည်။ ရေငုပ် ကျင်လည်သည်။ ပျံသန်းရာ၌ လျင်မြန်၍ တောင်ပံရိုက်တတ်သည်။ များသောအားဖြင့် ရေပြင် တွင် ကပ်၍ ပျံသန်းပြီးလျှင် သစ်ငုတ်ချုံဖုတ်စသည်တို့ကို ကျင်လည်စွာ တိမ်းရှောင်သွားနိုင်သည်။ ပျံသန်းစဉ် အလွန်ဆူညံ စွာလည်း အော်တတ်သည်။
အသိုက်များကို သစ်ကိုင်း၊ မြက်၊ ငှက်မွေး၊ ငှက်တောင်များ ဖြင့် ရေစပ်ရှိ မြေပြင်မှ ၁ဝ ပေ ၁၅ ပေခန့် မြင့်သော သစ် ခေါင်းများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ တမြုံ လျှင် ဥ ၈ လုံးမှ ၁၄ လုံးအထိ ရှိတတ်၍ တစ်ခါ တစ်ရံ ၂၂ လုံးအထိပင် ရှိတတ် သည်။ ဥများမှာ ဖြူ၍ ပြောင်လက် ချောမွတ်နေသည်။ ဥ၏ အရွယ်မှာ ပျမ်းမျှအလျား ၁ ဒသမ ရ လက်မနှင့် ပြက် ၁ ဒသမ ၂၉ လက်မခန့် ရှိတတ်သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Nettapus coromandelianus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကလကတ်_(ငှက်)&oldid=712734" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။